biby sy zavamaniry | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: biby sy zavamaniry
Fikarakarana sy fikojakojana ny takelaka Achatina
Ny sifotra Achatina afrikanina dia iray amin'ireo mollusc lehibe indrindra eto an-tany. Ny halavan'ireto sifotra ireto dia mety hahatratra hatramin'ny 30 cm. Ny toerana onenana miely dia ireo firenena manana toetr'andro tropikaly. Raha amin'ny anao manokana ...
Mitazatazaka ao amin'ny tranony i Achatina
Ny saka, ny alika ary ny biby mpikiky kely dia biby fiompy ankafizina indrindra. Notezaina anaty trano sy trano izy ireo, na inona na inona fironana lamaody. Fa ny lamaody dia mipoitra amin'ny Achatina sy ny biby hafa ...
Sifika Achatina - biby fiompy hafakely avy any Afrika - fikarakarana, fiterahana, fikojakojana
Raha mila mandany fotoana be any am-piasana ianao, nefa miaraka amin'izay dia tena maniry hanana biby kely ao an-trano ianao. Raha mitandrina alika dia "rendrareha tsy azo ekena", ary ny karazan-biby rehetra dia toa "banal". Rehefa tianao ...
Aiza no mitombo ny eucalyptus any Rosia?
Aiza no maniry ny kininina any Russia? Tena mitombo eto ve izy? Betsaka ny any Aostralia. Maniry eo izy ireo. Ary eto, raha misy, dia amin'ny zaridaina botanika dia tsy maintsy ...
Azo atao ve ny mitazona trano saka sy vorona amin'ny fotoana mitovy?
Azo tazonina ao an-trano miaraka amin'ny saka ve ny saka sy ny vorona? Nandritra ny taona maro dia nanana canary tao anaty tranom-borona sy saka iray izahay. Tsy nanahirana azy akory izy fa matetika nipetraka tamin'ny tany fotsiny ...
Inona no karazana bibikely hafa ankoatra ny rambony ka mahavita mihazakazaka eny amin'ny gorodona ao amin'ny trano iray?
Bibikely hafa ankoatry ny kalalao azo atao FAST mihazakazaka manerana ny gorodona ao amin'ny trano iray? Misy kalalao mainty. Toy ny voangory mahazatra izy ireo, mainty ary somary mamiratra. Tsy toy ny mena mena sy ...
Iza moa izany?
Iza moa i Fenech? Biby sofina monina any an'efitra ity. Biby mahatalanjona izay afaka miaina amin'ny hafanana, ary mihaza mihitsy aza. Ny sofina lehibe dia karazana mpikaroka izay mahatratra ny hetsika kely indrindra amin'ny sakafo atoandro ho avy ...
Nahoana no fotsy fotsy no nantsoina hoe fotsy?
Fa maninona no tena fotsy no nantsoina ilay holatra fotsy? Ny holatra boletus dia antsoina hoe fotsy amin'ny lokony maivana na dia efa maina aza. Ny faritra ambany amin'ny satroka holatra dia maivana loko, ary ny ambony volontany. Holatra fotsy no mpanjaka ...
Nahoana ny tontolon'ny tany no miteraka?
Fa maninona no mila volom-biby ny sompanga? Ny volom-borona dia mila volom-borona amin'ny tanjona mitovy ilaintsika olombelona ny hoditra, ny fiarovana ny vatana amin'ny fitaoman'ny tontolo iainana ivelany, ny volon'ny kankana dia ampy ...
Ahoana ny fomba hanonoana saka persanina?
Iza no anaran'ny saka persiana? Rehefa misafidy anarana dia ilaina ny misafidy fikambanana vitsivitsy izay afaka mampifandray anao amin'ny maha-tompona sy ny biby fiompinao, na miainga amin'ny fari-pitondrantena ilaina amin'ny fanomezana anarana manokana, ...
Inona avy ireo ampahany takiana amin'ny selan'ny zavamananaina rehetra?
Inona avy ireo faritra ilaina amin'ny sela ao amin'ny zavamananaina rehetra? Raha ny tsaroako avy amin'ny fizotran'ny fandaharam-pianarana dia misy ilay sela ao anatin'ilay sela. Ny atiny kosa dia misy ADN. Akorandriaka antsoina hoe membrane. Cytoplasm - ...
Nahoana ny omby no mila tandroka?
Fa maninona no mila tandroka ny omby? Heveriko fa naterin'ny omby ny tandroka, voalohany hiarovana ny tenany sy ny olon-tiany manoloana ny loza sy ny fahavalo, ary faharoa, ny fivoaran'ny omby dia mety hanome tandroka ...
Nahoana ny saka iray no maka totozy eny an-dalambe ary mitondra azy any an-trano?
Fa maninona ny saka iray no nahazo totozy teny an-dalana, nitondra azy nody? Instinct, dia entiny any amin'ny tompony. Izany hoe ilay olona mamelona azy. Tsy maninona ny fanehoana fanoloran-tena. Amin'izay mba…
Nahoana ny bandy no mariky ny faharetana?
Fa maninona ny poara dia tandindon'ny faharetana? Angamba izany no fomban-drazana sinoa (ny poara dia hazo lava velona, ​​maniry hatramin'ny 100 taona), any amin'ny firenena hafa dia misy heviny an'ohatra hafa. Any Gresy fahiny, ny pir ...
Afaka mamely olona sy alika ve ny rambony ary nahoana?
Afaka manafika olona sy alika ve ny amboahaolo ary maninona? Ny amboahaolo dia mavesatra be, fa ny viriosy ihany no tsy hita. Tsy misy kinova hafa, fanahy ratsy tsy mahazo miditra amin'ny amboahaolo ...
Nahoana no tsy mamy ny alika?
Fa maninona ny alika no tsy mahazo mihinana zava-mamy? Toy ny amin'ny olombelona, ​​ny mamy dia hisy fiatraikany ratsy amin'ny nifin'ny alikao. Ny siramamy dia manala ny calcium amin'ny nify, manjary malemy izy ireo, ary avy hatrany dia manomboka ny asany ny bakteria malemy, ...
Inona no atao amin'ny zavamaniry ho an'ny voninkazo iray?
Inona no miforona amin'ny zavamaniry solon'ny voninkazo? Mazava ho azy - ny fihary atodinaina ny foetus, raha nahomby zezika. Heveriko fa masomboly ireto, (raha ohatra ny voninkazo) boaty misy masomboly, izay mety masaka avy eo ...
Ahoana ny fomba hampianarana saka hanidina ao ambadiky ny toeram-pivoahana?
Ahoana no hampiofanana saka hanaraka azy ao amin'ny trano fidiovana? Tena iriko ny saka hankany amin'ny trano fidiovana ary hisosotra hamonjy azy, avy eo tsy mila manadio ny boaty fako aho, ...
Nahoana ny saka no mitondra totozy ao an-trano?
Fa maninona ny saka no mitondra totozy ao an-trano? Ny saka dia mampiditra ao an-trano tsy ny totozy voasambotra sy ny akoho amam-bolan'ny olon-kafa ihany, fa ny fatin'ny voalavo koa, izay efa mihinana antsasak'izay. Maharikoriko ny fahitana fa ny saka ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 249 Next Page
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,006.